Nhụchalụ Scrapblog! | Martech Zone
Tọzdee, Machị 29, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Shel Israel bịanyere aka na ya na-agụ “Onye edemede. Onye ndụmọdụ. Nice Guy. ” Ọ bụ n'ezie ezigbo mmadụ! Taa Shel dere anyị gwa anyị banyere onye ahịa ya, Scrapblog, mepee saịtị ha maka ndị na-ede blọgụ na hụchalụ. Agara m ịgagharị na previu ma gbafuo!
Enwere ọtụtụ okwu na ntanetị site na ndị mmemme mmemme na-ekwenye na ngwa ịntanetị agaghị enwe ihe ịga nke ọma iji dochie ngwa desktọọpụ. M na-ahụ tọn atụnyere n'etiti abụọ na ọ na-atụ m n'anya mgbe niile na ndị naysayers na-arụ ụka na izi ezi nke SaaS na Rias.
Ngwa dị ka Scrapblog kwesịrị ịgbanwe obi gị. Na Flash Flex interface mara mma. O nwere atụmatụ na ihe mgbagwoju anya nke ngwa desktọọpụ, ọbụlagodi menu mmanya, mana ọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị. Enwere m 2Gb nke RAM na Firefox Memory Usage naanị wụlitere 50Mb yana ngwa zuru ezu mepere ma na-agba ọsọ! Tụlee nke ahụ na ngwa desktọọpụ!
Ọ bụrụ na nke a bụ ngwa desktọọpụ, ọ ga-adị mma. Ma ọ bụghị! Ana m arịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na anaghị m a attentiona ntị na mkpụrụ na mgbokwasị nke ngwa ahụ - atụmatụ ndị ahụ dị ọtụtụ iji depụta ebe a. Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-arụ ọrụ na-enweghị ntụpọ ma mara mma karịa. Nke a bụ ọdịnihu nke web!
Atụmatụ Agụmagụ Reader maka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ